Afaan Oromoon Barachuun Afaan Ingliziitti Dadhabuuf Sababii Ta'uu Hin Danda'u
Imaammata barnootaa tokko,akkaataa adda addaan hojii irra oolchuutu nu miidhe jedhu baratonni Oromoo. Angawoonni Oromiyaa garuu, fedhii uummataa hojii irra oolchine jedhu.
Akkuma beekamu Itiyoophiyaa keessatti, sabaa fi sablamonni afaan ofiin akka baratan mirgii eega kenname waggoota 20 guutuuf deema. Haala kanaan, naannoolee Oromiyaa fi Tigraay irraa kan hafe naannooleen biroon kutaa tokkoo jalqabee hanga kutaa afurii ykn ja’aatti afaan ofiin barataa, dabalataan immoo Afaan Inglizii akka barnoota tokkootti fudhataa turanii kutaa torbaffaatti garuu, afaan ofii akka barnoota tokootti barataa isa hafe hunda immoo Afaan Ingliziin itti fufu.
Oromiyaa fi Tigraay keessatti garuu, barattoonni Afaan Ingilizii akka barnoota gosa tokkootti fudhataa, kanneen hafan mara immoo hanga kutaa sadeetiitti afaan ofiin baratu; Kutaa 9 yeroo seenan, afaan ofii akka barnoota tokkootti fudhachuu irraa kan hafe barnootni gutummaatti Afaan Ingliziin kennama.Afaan Amaaraa immo kutaa 5 irraa jalqabee akka gosa barnoota tokkootti baratu.
Barattonni gutummaa Itiyoophiyaa keessa jiran kutaa 7 yeroo seenan barnoota akka Fiziksii, Kemistrii, Bawuloojii fi kanneen biroo barachuu jalqabu. Dhuma irratti kutaa 10 yeroo xumuran qormaata biyyoolessaa ykn Maatrikii jedhamu fudhatu.
As irratti, kanneen akka Oromiyaa keessaa kutaa sagalii fi kudhan qofa Afaan Ingiliziin baratanii fi kanneen kutaa 7 jalqabee hanga kutaa 10tti afaan Ingliziin baratan kanaaf, qormaata wal-fakkaataa ykn tokko kennuun, miidhaa qaba moo hin qabu? Walumaa-gala qulqullinni barnootaa sadarkaa maali irra jira? Barattoonni, barsisonni, aangawonni mootummaa akkasumas kanneen biroon maal jedhu?